I-NetBeans 12.2 Ifika ngokusekelwa kwezici ezintsha ku-Java, i-PHP nokuningi | Kusuka kuLinux
INetBeans 12.2 isivele ikhishiwe futhi kule nguqulo entsha, i-Apache Foundation imemezele ukuthi amaNetBeans 12.2 lokho ikakhulukazi inikeza ukusekelwa kwezici ezintsha eziqondene ne-JDK 14, JDK 15, ne-PHP 8.
Kulabo abangajwayelene namaNetBeans, kufanele ukwazi lokho iyi-IDE (indawo edidiyelwe yentuthuko) kweJava, inhloso yayo enkulu ukusheshisa ukwakhiwa kwezicelo zeJava, kufaka phakathi izinsiza zewebhu kanye nezinhlelo zokusebenza zamaselula.
Ngaphezu kokusebenza okujwayelekile kwethuluzi, kungenzeka futhi ukulinweba ngokusekelwa kwezilimi zohlelo lwe-C no-C ++, ukusekelwa kokwakhiwa kwezinhlelo zokusebenza ekwakhiweni kwezakhiwo ze-SOA, ukusetshenziswa kwezikimu ze-XML ne-XML, i-BPEL ne-Java Web Services noma ukumodela UML. Isandiso seNetBeans Profiler sikuvumela ukuthi ulandelele ukusetshenziswa kwe-CPU nokusetshenziswa kwememori kohlelo lokusebenza olunikeziwe.
Ngakolunye uhlangothi, i-NetBeans Mobility Pack ingeza i-debugger kumvelo yeNetBeans ekuvumela ukuthi ubheke ukwenziwa kwezinhlelo zamaselula.
INetBeans ibhalwe kuJava, okuyenza iguquguquke kakhulu futhi ingaqhutshwa kuzingxenyekazi zesistimu ezahlukahlukene (iWindows, iLinux).
1 Mayelana neNetBeans 12.2
2 Ungayifaka kanjani iNetBeans kuLinux?
Mayelana neNetBeans 12.2
Uhlobo olusha lweNetBeans 12.2 lufika kungekudala ngemuva kwezinyanga ezimbili kukhishwe inguqulo 12.1. FUTHILe nguqulo entsha ingeza izici eziningana ezintsha kumthombo ovulekile we-IDE futhi wenza izibuyekezo ezithile emitatsheni yolwazi eyahlukahlukene.
Lokhu kufaka phakathi ukusekelwa kwezici zeJava eziqonde ngqo ku-JDK 14 no-15, ukwengezwa kwesihleli seJava kanye ne-Java Debugger ku-Visual Studio Code (VS Code), izici ezintsha zeJavaFX neJava Web, nokuningi.
Futhi, ukungezwa kwe-PHP version 8 kungeziweNgalokhu, abasebenzisi beNetBeans manje sebenenqwaba yezici ezintsha abanazo, kufaka phakathi izinhlobo zokujoyina, opharetha bakwaNullsafe, nohlobo lokubuya lwe-static. Ukuxhaswa kwe-Oracle Jet, obekuyisikhathi esidlule, manje sekususwe ngokuphelele.
Kukhulunywe nangokuthi ukwenziwa kwamakilasi amasha, izixhumi ezibonakalayo nezindawo zokubhala enikezwe ngokunamathisela umbhalo ebhodini lokunameka.
Engxenyeni yamathuluzi wokuthuthukisa iwebhu yeJava, kushiwo lokho Ukusekelwa kohlaka lwentwasahlobo 5.2.9 MVC kwenziwe ngcono. Engxoxweni yokuhlela izakhiwo zeprojekthi yewebhu, ukulondolozwa kwe-URL ngezixhumanisi ezihlobene kushintshiwe. Ukuhlanganiswa kweDerby kususiwe kumamojula we-Payara Server.
Kwezinye izinguquko ezigqamile yale nguqulo entsha:
Ikhodi yokusekela yeJavaFX inwetshiwe ukuxhasa izinto ezingaphenduki.
Kungezwe ukusekelwa kwemisebenzi emisha ye-PHP 8.
Umhlanganisi we-javac ukhawulelwe kusimo esisodwa.
Ukuxhaswa okungasasebenzi kwe-Oracle JET kususiwe.
Ukusekelwa okuthuthukisiwe kweCSS3
Izinhlobo ezibuyekeziwe i-Ant 1.10.8, i-exec-maven-plugin 3.0.0, i-Gradle Tooling API 6.7, i-JDBC PostgreSQL 42.2.16, i-payara-micro-maven-plugin 1.3.0, i-Spring Framework 4.3.29, i-TestNG 6.14.3.
Ukutholwa kwama-JDK afakwe nge-SDKMan ne-Debian kwanikezwa.
Ukulungisa amaphutha komuntu ngamunye nokwenza amandla kuvunyelwe lapho iphrojekthi yeGradle ihlinzeka ngomsebenzi ofanele.
Ungayifaka kanjani iNetBeans kuLinux?
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukufaka amaNetBeans ekusatshalalisweni kwabo kweLinux, bangakwenza lokho ngokulandela imiyalo esabelana ngayo ngezansi.
Enye yezindlela zokufaka le IDE kuLinux ukulanda isifaki bese uyisebenzisa. Okudingekayo kuphela ukuthi ufake iJava.
Manje kufanele simukele isifaki kusuka kusixhumanisi esingezansi.
Lapho usufake yonke into ngaleso sikhathi, vula ifayili elisanda kulayishwa ku-directory yakho oyithandayo.
Futhi kusukela esibulalayo sizofaka lo mkhombandlela bese senza:
Ukwakha i-Apache NetBeans IDE. Uma nje yakhiwe ungasebenzisa i-IDE ngokuthayipha
Enye indlela yokufaka ngosizo lwamaphakeji weFlatpak, lapho kufanele sibe nokuxhaswa kuphela ukuze sikwazi ukufaka lolu hlobo lwephakeji kusistimu yethu.
Ukufakwa kungenziwa kusuka esigungwini ngokuthayipha imiyalo elandelayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » INetBeans 12.2 ifika nokusekelwa kwezici ezintsha kuJava, PHP nokuningi
I-Jitsi Desktop: Umthombo Ovulekile Wekholi Yevidiyo nohlelo Lokuxoxa